ရေပိုက်လိပ် nbr ပစ္စည်းစာရွက်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | လီပူး
B1 ကိုလျှံနှောင့်နှေး XPS
B3 လျှံနှောင့်နှေး XPS
B2 လျှံနှောင့်နှေး XPS
ကြမ်းပြင်အပူ Extruded ဘုတ်အဖွဲ့
ရေပိုက်လိပ် nbr ပစ္စည်းစာရွက်
ရော်ဘာ Tube မြှုပ် Hollow မြှုပ်ပြွန် / ဒြပ်ရော်ဘာအမြှုပ်: 1. အသုံးပြုမှု: သင့်တော်အအေးစနစ်၏အပူအထီးကျန်မှုတွေနဲ့အအေးအဘို့ 2. အင်္ဂါရပ်များ ducts: အရည်အသွေး EPDM & NBR / PVC ပစ္စည်း, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆန့ခွန်အားကိုဆန့်ကျင်အိုမင်းနဲ့ anti-ချေးအားသာချက်များ: 1. Excellent ကစွမ်းဆောင်ရည်။ insulator တွင်လည်းပိုက် NBR နှင့် PVC ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာ fibrous ဖုန်မှုန့်, benzaldehyde နှင့် chlorofluorocarbons ဆံ့မခံပါဘူး။ ထို့အပွငျကအနိမ့်စီးကူး & အပူစီးကူး, ကောင်းသောအစိုဓာတ်ကြသည်နှင့် fi ရှိပါတယ် ...
ရော်ဘာ Tube ရေမြှုပ်
ဆွန်းမြှုပ်ပြွန် / ဒြပ်ရော်ဘာအမြှုပ်:
1. အသုံးပြုမှု: သင့်တော်အအေးစနစ်၏အပူအထီးကျန်မှုတွေနဲ့အအေးအဘို့အ ducts
2. အင်္ဂါရပ်များ: အရည်အသွေး EPDM & NBR / PVC ပစ္စည်း, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆန့ခွန်အားကိုဆန့်ကျင်အိုမင်းနဲ့ anti-ချေး
1. Excellent ကစွမ်းဆောင်ရည်။ insulator တွင်လည်းပိုက် NBR နှင့် PVC ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာ fibrous ဖုန်မှုန့်, benzaldehyde နှင့် chlorofluorocarbons ဆံ့မခံပါဘူး။ ထို့အပွငျကအနိမ့်စီးကူး & အပူစီးကူး, ကောင်းသောအစိုဓာတ်ကြသည်နှင့် fireproof ရှိပါတယ်။
2. Wide ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ insulator တွင်လည်းပိုက်ကျယ်ပြန့်နိုင်အောင်ပေါ်ရေပိုက်, လေပြွန်ပူ-ရေပိုက်နှင့် condensing, ရေပိုက်အေးခဲနေသောအလယ်ပိုင်းလေအေးပေးစက်၏ယူနစ်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအအေးများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အလွယ်တကူ install လုပ်ဖို့3။ insulator တွင်လည်းပိုက်သာအလွယ်တကူသစ်ကိုပိုက်လိုင်းနှင့်အတူ install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းရှိပြီးသားပိုက်လိုင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ခုတည်းသောအရာထို့နောက်ကော်တစ်ခုကိုဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်က insulator တွင်လည်းပိုက်များ၏စွမ်းဆောင်ရည် negtive သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမရှိပါ။
ရွေးချယ်ဖို့ 4. အပြီးအစီးမော်ဒယ်များ။ မြို့ရိုးအထူ 6,25 မီလီမီတာကနေ 50mm ဖို့နေကြပါတယ်, နှင့် inse အချင်း 6mm ကနေ 89mm ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ပစ္စည်း အဓိကကုန်ကြမ်း: NBR / PVC
conduction အချက် အပူ-ကာကှယျနှင့်လေအေးပေးစက်များဆောက်လုပ်ခြင်း, စီးပွားရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း, အပူလျှပ်ကာအတွက်ကြီးမားတဲ့တိုင်ကီများနှင့်ပိုက်၏အခွံ၏အပူထိန်းသိမ်းခြင်း, ပူးတွဲပိုက်
SDR Flame ဟာနှောင့်နှေးအတန်းအစား B1 ကို
သိပ်သည်းဆ 40 ~ 80Kg / m3
အိုမင်းခုခံ အနည်းငယ် crumpling မရှိဒါကိုတော့မရှိ pin ကိုပေါက်တွေ, deforming မဟုတ်ပါဘူး။
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား ပိုက် & စာရွက်
ပုံမှန်အရွယ်အစား ပိုက်: ID ကို 6-108mm နှင့်အတူ
စာရွက်: အထူ 10-30mm နှင့်အတူ
အဖုံး 1.PE/carton ဖောက်သည် '' တောင်းဆိုမှုကိုနှုန်းအဖြစ် 2. ထုပ်ပိုး
1, ဒါဟာအနီ, အပြာ, ခွဲခြားရန်ကိရိယာများတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသို့ခွဲခြားထားတယ်။
2, ဒါဟာတရုတ် B-class ကိုမီး rating ရောက်ရှိ: အအမျိုးသားရေး GB8624-2012 စံ B-class ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းဘဝတိုးချဲ့ဖို့ 3, စိုခုခံအချက်≥ 6000, ပစ္စည်းစရေငွေ့။
4, အနိမျ့အပူစီးကူး: ဆဲလ်ယူနီဖောင်းနှင့်ဒဏ်ငွေ, ပိုမိုလေထု lock နိုငျသညျ, အနိမ့်အပူစီးကူးခြင်းနှင့်ပိုမိုတည်ငြိမ် (အပူစီးကူးအပူလျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်ဟာအပူစီးကူးအောက်ပိုင်း, ပိုကောင်း, insulator တွင်လည်းပစ္စည်းများကို၏ insulator တွင်လည်းအကျိုးသက်ရောက်၏အရေးပါသောညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။0င်ºC, 0.032w / MK ၏ပစ္စည်းကိုအပူစီးကူး) ။
5, ပိတ်သည်-ဆဲလ်အမြှုပ်, အစိုဓာတ်ကို-အထောက်အထားစွမ်းဆောင်ရည်: ပြီးပြည့်စုံတံခါးပိတ်-ဆဲလ်အမြှုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြား၏လွတ်လပ်သောအပေါငျးတို့သဆဲလ်နှင့်တကွ, လေထု၏ non-Unicom တံခါးပိတ်လေထုအလွှာဖွဲ့စည်းရန်သှ, ထိထိရောက်ရောက်ထုတ်ကုန် insulator တွင်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန် ။
6, Flexible စွမ်းဆောင်ရည်: တင်နိုင်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်မမှန်ပိုက်၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်တုန်ခါမှုများအသုံးပြုခြင်း၏သင်တန်းအတွက်မျြးစိမျ့စိမျ့ရေနှင့်ရေနွေးပိုက် minimize နိုင်သည့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏မြင့်မားသောဒီဂရီကြောင့်အလုပ်သမားများနှင့်ပစ္စည်းများ, ကယ်တင်နိုင်ပါ။
ပစ္စည်းကိုချွတ် peeled ကိရိယာဆန်းသစ်, တူညီတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်သုံးရနိုင်သည့်အခါ 7, လြယ္ကူ install လုပ်ဖို့, ပြန်သုံးနိုင်ပါသည်။
Eifs လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုဖန်မျှင်ထည် Net က
ပြင်ပက Wall EPS insulator တွင်လည်း Polystyrene ဘုတ်အဖွဲ့
ပြင်ပက Wall, အပူရော့ခ်သိုးမွှေးဘုတ်အဖွဲ့
insulator တွင်လည်းရော့ခ်သိုးမွှေး Composite ဘုတ်အဖွဲ့
ရော့ခ်သိုးမွှေး Composite လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုဘုတ်အဖွဲ့